आँधिखोला लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म कमायो ४ करोडभन्दा बढी नाफा ,२० लाख ६६ हजार खराब कर्जा संकलन - Aarthiknews
आँधिखोला लघुवित्तले चौथो त्रैमाससम्म कमायो ४ करोडभन्दा बढी नाफा ,२० लाख ६६ हजार खराब कर्जा संकलन
काठमाडौं । आँधिकोला जलविद्युत वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म रू. ४ करोड १० लाख ५७ हजार खुद नाफा गरेको छ । सोमवार सार्वजनिक कम्पनीको उक्त अवधिसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष ११६ प्रतिशत खुद नाफामा बृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीले रू. १ करोड ९० लाख १२ हजार यो नाफा गरेको थियो ।
यस वर्ष खराब कर्जा संकलन रू. २० लाख ६६ हजार गरेको कम्पनीले सम्भावित जोखिम शिर्षकमा रकम छुट्याएको छैन् । जसका कारण सञ्चालन नाफा १०३ प्रतिशत बृद्धि हुँदा कम्पनीको नाफामा बृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष रू. ३ करोड ११ लाख ९ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीको गत वर्ष रू. ६ करोड ३१ लाख ३ हजार यो नाफा भएको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा १०६ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी रू. ८ करोड १ लाख ८१ हजार जगेडा कोष रकम कायम भएको छ । गत वर्ष २९ प्रतिशत बढी रू. ३६ करोड ८७ लाख ३८ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले ४९ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ५ करोड ६१ लाख १५ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत वर्ष ४ दशमलव ६ मा झरेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४१ दशमलव शून्य ६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १८० दशमलव १८ रहेको छ ।